တစ်သက်လုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ငွေတွေကို မကွယ်လွန်လွန်ခင်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ လေးစားဖွယ် ဦးလေးကြီး – Shwe Yaung Media
တစ်သက်လုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ငွေတွေကို မကွယ်လွန်လွန်ခင်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ လေးစားဖွယ် ဦးလေးကြီး
2021 | 11/11/2021 | Knowledge | No Comments
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ” တဲ့…ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ အလှူကတော့ တကယ့်ကို ချီးကျူး သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်….
မိမိကိုယ်တိုင်က ဆင်းရဲသူဖြစ်ပြီး နေစရာအိမ်တောင်မရှိတဲ့ သန့်ရှင်းရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် သူလှူခဲ့တဲ့ ငွေတွေကတော့ တကယ့်ကို များပြားလှတာပါ…
ဒီလို ချီးကျူးလေးစားရမဲ့ အိမ်ရာမဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ အလှူကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့တာပါ။
အဆိုပါဦးလေးကြီးဟာ လမ်းတွေပေါ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငွေရှာရသူဖြစ်ပြီး အိပ်တော့လည်း အိမ်မရှိလို့ 𝙇𝙤𝙗 𝙋𝙪𝙧𝙞 က 𝙎𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙀𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 ဆိုင်ရှေ့မှာပဲ အမြဲအိပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သနားစရာကောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးဟာ သူမကွယ်လွန်ခင်မှာ အမျိုးတွေကို ကိစ္စတစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်…
အဲတာကတော့ တစ်သက်လုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေအကြွေစေ့လေးတွေအကုန်လုံးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လှူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
အမျိုးတွေကလည်း လှူပေးခဲ့ပြီး ငွေပမာဘယ်လောက် ရှိမှန်းမသိရပေမဲ့ အတော့်ကိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ခုလို လူကိုယ်တိုင် မချမ်းသာပေမဲ့ ဆင်းရဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ မသုံးရက်ဘဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး တစ်သက်လုံးစုထားတဲ့ ငွေတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ လုပ်ရပ်က ချီးကျူးလေးစားဖွယ်ပါ…
.ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်…
တစ္သက္လုံး သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ရလာတဲ့ ေငြေတြကို မကြယ္လြန္လြန္ခင္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလႉခဲ့တဲ့ ေလးစားဖြယ္ ဦးေလးႀကီး
မရွိလို႔ မလႉ မလႉလို႔မရွိ” တဲ့…ဒါေပမဲ့ ခုေျပာျပမဲ့ ဦးေလးႀကီးရဲ႕ အလႉကေတာ့ တကယ့္ကို ခ်ီးက်ဴး သာဓုေခၚဖြယ္အလႉတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…. မိမိကိုယ္တိုင္က ဆင္းရဲသူျဖစ္ၿပီး ေနစရာအိမ္ေတာင္မရွိတဲ့ သန႔္ရွင္းေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ေပမယ့္ သူလႉခဲ့တဲ့ ေငြေတြကေတာ့ တကယ့္ကို မ်ားျပားလွတာပါ…ဒီလို ခ်ီးက်ဴးေလးစားရမဲ့ အိမ္ရာမဲ့ ဦးေလးႀကီးရဲ႕ အလႉကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ မွ်ေဝခဲ့တာပါ။အဆိုပါဦးေလးႀကီးဟာ လမ္းေတြေပၚမွာ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္
ေငြရွာရသူျဖစ္ၿပီး အိပ္ေတာ့လည္း အိမ္မရွိလို႔ 𝙇𝙤𝙗 𝙋𝙪𝙧𝙞 က 𝙎𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙀𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 ဆိုင္ေရွ႕မွာပဲ အၿမဲအိပ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။သနားစရာေကာင္းတဲ့ ဦးေလးႀကီးဟာ သူမကြယ္လြန္ခင္မွာ အမ်ိဳးေတြကို ကိစၥတစ္ခု လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္…အဲတာကေတာ့ တစ္သက္လုံးသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြအေႂကြေစ့ေလးေတြအကုန္လုံးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လႉေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။
အမ်ိဳးေတြကလည္း လႉေပးခဲ့ၿပီး ေငြပမာဘယ္ေလာက္ ရွိမွန္းမသိရေပမဲ့ အေတာ့္ကိုမ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္… ခုလို လူကိုယ္တိုင္ မခ်မ္းသာေပမဲ့ ဆင္းရဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့ မသုံးရက္ဘဲ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး တစ္သက္လုံးစုထားတဲ့ ေငြေတြကို လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ဦးေလးႀကီးရဲ႕ လုပ္ရပ္က ခ်ီးက်ဴးေလးစားဖြယ္ပါ….ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဦးေလးႀကီးတစ္ေယာက္ ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ပါေစလို႔ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္…
တပ်ထဲသို့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခံခဲ့ရကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
လေးကေ့ကော် ဘက်သို့ စစ်ကောင်စီမှ အင်အားတိုးချီတက်လာ
ချောမောလှပတဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာမိန်းကလေးကို ချစ်ကြိုက်မိသွားတဲ့ အသက်၇၀အရွယ် ဘီလျံနာသူဋ္ဌေးကြီးရဲ့အဖြစ်